15 xaaladood ayaa qofka faqiirka ah ku dhaqmaa, iyadoo kuwa wax heysta sidaasi yeelin… – Hagaag.com
15 xaaladood ayaa qofka faqiirka ah ku dhaqmaa, iyadoo kuwa wax heysta sidaasi yeelin…
Posted on 23 Luulyo 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Dadka fuqarada aan ku tilmaameyno ma ahan oo keliya kuwa aan waxba heysan laakin xataa kuwa shaqeysta hadana dakhligooda uu yar yahay, kuwa ceyrta qaata oo shaqo la’aanta ah iwm ayaa faqiir ah.
Dadka faqiirka ah waxay waqti badan daawadaan television-ka.
Waxa loola jeedaa in waqti badan uga baxo daawashada TV, intii ay qabsan lahaayeen howlahooda maalmeed, haddii qofku uu rabo inuu akhbaarta la socdo, waqtiga akhbaarta ayuu furan karaa amaba waxaa lagu jiraa waqti casri ah oo dadka badankiisa heysta telefoono internet leh, halkaasi ayuu kala socon karaa.
Dadka faqiirka ah waxay cunnaan cuntada Fast food-ka.
Ma oga dhibaatooyinka badan oo ay caafimaad ahaan u leedahay cuntada Fast Foods ka, iyo tan kale asaga oo ka wahansada inuu wax caafimaad leh karsado, waxaa laga yaabaa inuu raashin guriga u yaalo hadana lacag kale uu qarash gareeyo.
Dadka faqiirka ah hurdada ayey ku daahaan subaxdii.
Caafimaad ahaan iyo riziq raadis ahaanba in aroorti waqti hore laga tooso hurdada ayaa wanaagsan, waxaa halkaasi kaaga lumaya waqtigii wax qabsashada.
Dadka faqiirka ah haddii nasiib xumo ku dhacdo qof kale ayey dusha u saaraan.
Qaladaadka waxbaa laga bartaa ee guri inta la isku soo xiro oo la baroorto kaa saari meyso, iyo gefkaaga inaad qof kale ku eedeysid waa laga fiican yahay, haddii nasiib xumo kugu dhacday fiiri halka ay wax ka xun yihiin hadana dib u bilow adigoo wax ka baranaya wixii qaldamay.
Dadka faqiirka ah ma heystaan keyd lacageed.
Keydka lacagta waa muhim si noloshaada aad u badbaadisid, ka soo qaad waxaad heshay badeeco raqiis ah oo aad ka faa’idi kartid, waxay u baahan tahay inaad lacag geliso, arrimo kale oo deg deg ah ayaa adiga ama reerkaaga idinku dhici kara waxaad u baahaneysaa lacag aad isku furdaamisid.
Dadka faqiirka ah waxay aad u isticmaalaan Credit card.
Lacagta Credit card aad ka isticmaaleysid waa deyn dulsaar leh, haddii aadan waxa aad u isticmaaleysid aanan muhim aheyn ha isticmaalin, tusaale adigoo telefoonka gacanta heysta ayaa rabtaa inaad iibsatid mid cusub oo soo baxay ha yeelin, gurigaaga oo si fiican u goglan ayaad rabtaa inaad bedeshid ciidaha ha yeelin.
Dadka faqiirka ah caruur badan ayey leeyihiin.
Waqtigan xaadirka ah caruurtu waxay u baahan yihiin waxyaabo fara badan oo ay xaq u leeyihiin sida waxbarasho, caafimaad, nolol iwm. isku dheeli tir awoodaada iyo caruurtaada iyadoo la ilaalinayo xuquuqda ilmaha iyo hooyadood, waa la ogyahay wax walba inuu Ilaahay wato, hadana dadaal baa lagaa rabaa.
Dadka faqiirka ah ma booqdaan inta badan dhakhtarkooda.
Booqashada dhakhtarka waa wax wanaagsan si aad ula socotid xaalada caafimaadkaada, tusaale haddii cudurka cancer-ka ku hayo Allaha naga hayee, haddii waqti hore la ogaado wax baa laga qaban karaa, laakin haddii dhulka ku soo dhigto waxba lagama qaban karo. sidaa darteed baaritaanka joogtada ah waa lagama maarmaan.
Dadka faqiirka ah lacagta waxay bixiyaan iyagoon weli helinba.
Waxaad arkeysaa adigoo lacag gacanta ku heyn oo aad lacag bixineysid oo deyn kugu ah, horey ayaan u soo sheegnay keyd lacageed, hadaadan gacantaada lacag ku jirin mid deyn ah ha sii bixinin ee ka joog.
Dadka faqiirka ah waxaa ku wareegsan dad kale oo faqiir ah.
Haddii aad faqiir tahay raadi meelaha fursadaha aad ka heli kartid iyo dadka aad ka heli kartid intuba, qof aadan waxba ka faa’iideyn dhinac kasta ha dul joojin, raadso dadka wax ku dheer ee helay fursadaha liibaanta wax ka baro, hadaadan dadaalin wey kula jiifaneysaa.
Dadka faqiirka waxay jecel yihiin in qof kale dabada ka riixo.
Haku fakerin in qof kale ku dhaqaajiyo, ku kalsoonow awoodaada, raadi fursadaha, gacanta waa lagu qaban karaa laakin laguma jiidi karo adaa is jiidi kara.
Dadka faqiirka waxay iibsadaan dharka ama alaabta la soo raqiisiyo.
Adigoo waxba heysan ayaad rabtaa inaad iibsatid wax la soo qiimo dhimay, horta ka feker waxyaabaha muhimka kuu ah, kala sii mudnaanta wax walba ay leeyihiin.
Dadka faqiirka ah ma ictirafsana rai’yagooda iyo awoodooda.
Marka hore ku kalsoonow ra’iyagaada iyo awoodaada, wixii kuu dhimana ka doono meelaha aad is leedahay waa ka heli kartaa, isku day inaad wax curisid waxay ahaadaanba.
Dadka faqiirka nadaafadooda ma fiicna.
Casriga lagu jiro waa waqti aad dadka si toos ah ula kulmeysid oo aad wax la wadaageysid, haddii nadaafadaad fiicneyn qof kula shirkoobo heli meysid, fursadahaadana wey yaraanayaan, ku dadaal nadaafada.
Dadka Faqiirka ah waxay ku xiran yihiin Sports-ka.
Ma xuma sports-ka in laga faa’ideysto, laakin dad soo shaqo tagay ayaad waqti badan ee noloshaada ku lumineysaa, adigoo tv ka daawanaya amaba lacag ku bixinaya inaad ku daawatid stadium-kooda, mala diidana laakin waqti badan iyo maal ha isaga luminin, barnaamiyada sports waa lacag television-ada, u isticmaal lacagtaasi howlo kale. Waxa laga yaabaa inaad tageero koox u tahay oo dagaal dhinaca afka amaba gacan isu qaadaan taageero kale maxaad ka faa’iidi kartaa inaad u dhimato koox aad taageersan tahay.